Hoover H-purifier 700, nyochaa nke a nnukwu ikuku ọcha | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 05/06/2021 10:00 | Emelitere ka 27/05/2021 21:24 | General, Nyocha
Ihe nhicha ikuku bụ ngwaahịa nke na-ewu ewu, ọkachasị n'oge a mgbe pollen na-abụ onye iro kachasị nke ụmụ amaala na-arịa ọrịa. Otu ihe ahụ na-eme mgbe anyị na-ekwu maka nnukwu obodo, ebe mmetọ nwere ike mepụta ikuku gas n'ụlọ ndị na-adịghị mma maka ndụ kwa ụbọchị ma nwee ike ibute ọrịa.
Anyị emeela nyocha ndị a na nso nso a na Actualidad Gadget, ma taa anyị na-eweta Hoover H-purifier 700, ikuku ọcha na nnukwu size na nke na-agụnye a humidifier ndị ọzọ uru. Choputa n’ime anyi ihe omuma ya, ya na adighi ike ya.
2 Nka na ụzụ na nzacha
3 Jiri na ụdịdị
4 Mgbakwunye na echiche onye editọ
Hoover bụ ụlọ ọrụ ọdịnala, nke ị ga - echeta nke ọma maka nnukwu ọganiihu ya na ndị na - ehicha agụụ n'oge gara aga. Ugbu a ya iche nke ngwaahịa e ukwuu ọhụrụ, n'etiti ha anyị na-ahụ H-ọcha, ezi ihe na-akpali vetikal na quasi-cylindrical ikuku purifier. Mpaghara dị ala bụ maka mmịcha mmịfụ na agba ọla ọcha, ịbụ plastik. Otu ihe a na - eme na akụkụ nke elu, plastic na - acha ọcha ebe anyị na - ahụ ụzọ abụọ a na - atụgharị anya maka njem, nkọwa nke ọrụ na mpaghara elu, ebe anwansi ahụ mere.
Agba: Silver / Silver + White
Ibu ibu: 9,6 n'arọ
Akụkụ: 745 * 317 * 280
Mpaghara a nwere oghere ikuku dị ọcha na ogwe njikwa na eriri okirikiri nke ga-egosi ọkwa. Anyị nwere ọrụ dị iche iche na ogwe aka a nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. A na-ahapụ akụkụ azụ ya na ntule na mkpuchi nyo. Mgbe iwepu ya, anyị ga-ahụ usoro nchịkọta USB nke nwekwara ekele dị ukwuu, ọ bụ ezie ee ee, anyị agbagharala nnukwute eriri USB na-echebara ụdị ngwaahịa anyị na-eme. Ebe ọ nwere eriri akpaka, eriri enweghị ike dochie eriri ogologo.
Nka na ụzụ na nzacha
Hoover H-Purifier 700 a na-egosipụta WiFi na njikọta Bluetooth na jikọtara ụzọ maka ojiji site na ngwa, ihe na-eju n'ihi ya egosipụta. O nwekwara ihe nyocha maka ihe dị elu nke carbon dioxide, yana ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri, ihe a na-enwe ekele maka ịlele ọnọdụ ngwaahịa na otu ụdị data a si dị mkpa kwa ụbọchị. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara sensọ urughuru 2,5 na 10 nm. Onwe ya, Echere m na onye nwere PM 2,5 gaara ezu.
Ọnụ nzacha: euro 59
N’elu anyị nwere ngosipụta nke ga-agwa anyị maka ikuku ikuku n’oge. Anyị nwere alerts maka nyo mmezi, nke anyị ga-atụle n'okpuru. Anyị nwere okpukpu atọ nke nzacha na nzacha mpụga nwere ike ịsacha, ihe nyocha Hera H13 na nzacha carbon na-arụ ọrụ nke ahụ ga - enyere anyị aka ịga n'ihu inactivation nke pollen, ọkachasị mmasị maka ndị na - arịa ọrịa nfụkasị ahụ. Yabụ, ngwaọrụ a dabara adaba maka oghere ruo mita 110, anyị anwalela ya na oghere nke ihe dịka 55 mita anọ. O nwere mkpochapu VOC na nke kachasị nke cubic mita dị ọcha kwa elekere ga-abụ 330, na-ewepu 99,97% nke ihe dị mma.
Jiri na ụdịdị
Hoover H-Purifier 700, nke ị nwere ike ịzụta na Amazon, Ọ nwere ụzọ atọ dị mkpa: Abalị, Nchekwa onwe na Oke, nke a ga-ahazi site na ntanetị aka yana site na ngwa ahụ. O sina dị, Anyị ga-enwekwa humidifier na-esi isi diffuser, nke anyị nwere ike zuo ezu na ngwaahịa gụnyere ke ngwugwu. Ọ bụ ihe mgbakwunye na-adọrọ mmasị na iru mmiri nke na-anọghị na ọtụtụ ndị na-eme ka ikuku dị elu, yabụ ọ bụ mgbakwunye.
Download ochie Hoover ngwa
Download ọhụrụ Hoover ngwa
Maka akụkụ ya, site na aplicación anyị nwere ike hazi H-purifier iji ya site na abụọ dị nnọọ ewu ewu mebere na-enyere aka, anyị na-ekwu banyere Amazon's Alexa na onye enyemaka Google. N'ọnọdụ abụọ ahụ, a ga-etinye ya na ndepụta nke ngwaọrụ anyị ma nye anyị ohere ịgbanye ma gbanyụọ ngwaọrụ ahụ ka ọ dị mma, yana mmemme mmemme karịa ngwa nke Hoover n'onwe ya nyere. Enwere ike imeziwanye ngwa ahụ, ọ nwere interface ndị ọrụ nke na-echetara anyị ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ pụtara ìhè sitere na Asia, agbanyeghị, ọ na-eme ihe ọ kwere nkwa.
Mgbakwunye na echiche onye editọ
Anyị nwere na H-purifier 700 nke H-Essence nso, nke bụ obere karama nke mmanụ dị mkpa nke a ga-etinye ozugbo, ya na karama ahụ na ihe nkesa ahụ. Nke a pụtara na na tiori anyị nwere ike iji naanị Hoover mkpa mmanụ ebe karama dabara na ngwaọrụ. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ike mejupụta karama a ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji mmanụ ndị ọzọ dị mkpa, ihe m kwadoro iji chekwaa ụgwọ. Nke a abụghị ikpe na nza, nke yiri ka ọ bụ nke zuru oke, mana anyị anaghị adụ ọdụ ọkọ, ọkachasị n'okwu a n'ihi na ọnụahịa dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere ndị na-agba ahịa na ahịa. Anyị nwekwara H-Biotics, ọtụtụ ọgwụ disinfectant na probiotic nke ewebatara na ihe nkesa ahụ.
Ikuku ikuku bu 360º, Otú ọ dị, ihe mmetụta ahụ enyela m ọkwa dị iche iche dị iche iche karịa ngwaahịa ndị ọzọ dị elu. Igwe ikuku dị ọcha adịghị ka ihe dị ike dị ka enwere ike ịtụ anya site na ngwaahịa nke kwere nkwa ruo mita cubic 300 kwa elekere, na mgbakwunye, nke a ga-emebi oke ahụ, nke na-anabata ọsọ ọsọ dị ala, mana n'abalị ka m tụrụ anya. Maka ndị nwere nsogbu ihi ụra na-ehi ụra, a ga-agbanyụrịrị H-Purifier. Nke a abụrụla ahụmịhe anyị na H-Purifier 700.
Nke a H-purifier na-enye anyị ihe ọzọ na-adịghị oke ọnụ ahịa, nke na-ahapụbeghị na mgbakwunye dị ka humidifier, ihe mmetụta ma ọ bụ onye na-enye nkọwa, mana na nkọwa ụfọdụ ọ na-abụ nzọụkwụ n'okpuru ndị ọzọ na-ehicha elu dị ka Dyson ma ọ bụ Philips. Agbanyeghị, ọdịiche ọnụahịa ahụ bụ aha ọjọọ na ọ na-enye anyị ikike karịa. Ihe kachasị njọ na ahụmịhe anyị bụ ngwa ahụ, opekata mpe na ụdị ya maka iOS. Can nwere ike nweta H-purifier 700 site na 479 euro na Amazon.
Ihe na: 5 June nke 2021
Ike ime ka ọ dị ọcha
Ọnụ ọgụgụ sensọ
Ngwa adịghị mma
Dịtụ mkpụmkpụ USB
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Hoover H-purifier 700, nyochaa nke a nnukwu ikuku ọcha